I-LineageOS 18.1 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
I-LineageOS 18.1 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
Abathuthukisi be-LineageOS (iphrojekthi uCyanogenMod eyishintshe ngemuva kokulahlwa kwe-cyanogeno Inc) dbahamba bazi muva nje ukuthi sebevele bakhiphile inguqulo entsha ye-LineageOS 18.1 (okususelwa ku-Android 11).
Inguqulo engu-18.1 yakhiwa ngokudlula i-18.0 ngenxa yokwakheka kokumakwa endaweni yokugcina izinto, ngaphezu kweqiniso lokuthi igatsha leLinageOS 18 ifinyelele ebunyeni ekusebenzeni nasekuzinzeni negatsha le-17, futhi kuyaziwa ukuthi ilungele ukudlulela ekwenzeni inguqulo yokuqala.
Uma kuqhathaniswa ne-LineageOS 17, kanye nezinguquko ezithile ze-Android 11 nokuthi abathuthukisi nabo babenezinkinga ezithile ngenxa yezinguquko ezenziwe ubhubhane, Okunye ukuthuthuka kuhlongozwa njengokuguqulwa kwegatsha le-android-11.0.0_r32 eligcinelwe i-AOSP.
Njengoba i-LineageOS inabathuthukisi emhlabeni wonke, bonke abanikeli bethu bazizwa ngonyaka owedlule ngamazinga ahlukahlukene, kepha uyini umphakathi uma ungekho kumalungu awo futhi ubanikeze okuthile abangakusebenzisa sonke leso sikhathi basebenza ngaphakathi? :).
Futhi Amakhono ohlelo lokurekhoda athuthukisiwe, engasetshenziswa njengerekhoda lezwi, ukudala amamemo wezwi nokuqopha ama-screencast, futhi yilokho ikholi yomsebenzi wokurekhoda okuqukethwe kwesikrini ihanjiswe esigabeni sezilungiselelo ezisheshayo Ukuyenza ihambisane ne-Android, isikhombimsebenzisi esisha sokubuka, ukuphatha nokwabelana ngamamemo ezwi nawo afakiwe, futhi kungeze ikhono lokushintsha izilungiselelo zekhwalithi yomsindo, kanye nezinkinobho ezifakiwe zokuma kancane nokuqhubeka nokurekhoda.
Olunye ushintsho olubalulekile kule nguqulo entsha ukuthi kungezwe uhlelo lokusebenza lokulondoloza lwe-Seedvault que ikuvumela ukuthi udale izipele ezibetheliwe Ingalayishwa kwisitoreji sangaphandle ngokuya ngeplatifomu ye-Nextcloud, kudrayivu ye-USB noma igcinwe kusitoreji se-onboard. Ukuze usebenzise iSeedvault, shintsha umhlinzeki wesipele ngokusebenzisa Amasethingi -> Uhlelo -> Isipele.
Futhi, singathola ukuthi kumadivayisi amadala angenawo ukwahlukaniswa kwe-A / B, kungezwe inketho yokuvuselela isithombe sokutakula kanye nohlelo lokusebenza (Ukucushwa -> Uhlelo -> (Bonisa okuningi) Isibuyekezi -> ««… »imenyu kwimenyu ekhoneni eliphezulu kwesokudla -> "Buyekeza ukutakula kanye nohlelo lokusebenza")
I-interface yesidlali somculo eyishumi nanye ivuselelwe, Futhi zonke izici ezintsha ze-Android zidluliselwe kuzinhlelo zokusebenza zomculo, kufaka phakathi ukusekelwa kokushintsha indawo yokudlala kusuka endaweni yesaziso.
Sekuyi ingezwe ku-firewall amandla okuvimba konke ukuxhumana kusuka kuhlelo lokusebenza olukhethiwe (uhlelo lokusebenza luzothatha ukuthi idivayisi ikumodi yendiza).
Futhi kuqokonyiswa nokuthi kungezwe ibhokisi elisha ukushintsha ivolumu, likuvumela ukuthi ulawule ivolumu yemifudlana ehlukene.
Isixhumi esibonakalayo esithuthukisiwe sokwenza izithombe-skrini ezinqampuliwe. Isici sezifinyezo sidlulisiwe, esivele ku-Android 11.
Injini yesiphequluli seWebView ivumelaniswe neChromium 89.0.4389.105.
Kungezwe ukusekelwa kwabaqaphi abangenazintambo (isibonisi se-Wi-Fi) samadivayisi amasha ngokususelwa kuma-chip weQualcomm.
Ikhalenda elijwayelekile le-Android lithathelwe indawo yimfoloko yalo yesihleli se-Etar.
Zonke izinhlelo zokusebenza zengeze ukusekelwa kwetimu emnyama.
Ukubuyisela kabusha kunikeza isikhombimsebenzisi esisha sombala okulula ukusisebenzisa.
Kungezwe ukusekelwa kokukhetha amasethi wezithonjana kusiqalisi sohlelo lokusebenza se-Trebuchet Launcher.
Ekugcineni, kushiwo lokho izithombe ezintsha zilungele amadivayisi angama-70 Imiyalo yokusebenzisa i-LineageOS 18.1 ku-Android emulator kanye ne-Android Studio imvelo nayo ilungisiwe, kanye namandla angeziwe wokuhlanganisa we-Android TV.
Ngesikhathi sokufakwa, kuwo wonke amadivayisi asekelwayo, ukutakula ngokwezifiso kunikezwa ngokuzenzakalela, okungadingi ukwahlukaniswa okuhlukile kokutakula.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngakho, ungaxhumana imininingwane ekulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » I-LineageOS 18.1 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo